Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan - Arbetsförmedlingen
Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan
> Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan
Adiag oo qaxooti ku yimid miyaad heshay sharciga degganaanshaha? Mise ma waxaad u soo guurtay qof qaraabo ah oo deggan Iswiidhan oo ugu badnaan helay sharcigiisa degganaanshaha labo sano ka hor? Markaas waxaad soo gali kartaa sharciga dadaalka aasaaska qaar dadka cusub.
Ku soo dhawoow xafiiska xidhiidhka shaqada oo kuugu dhaw si aad warbixin dheeraad ah u heshid.
Naga loo soo xariir
Telefoonka 0771 86 01 03
Hawlo si aad dhaqsi shaqo u heshid
Waxaan isla qoreynaa qorshe meeleysi. Qorshahaas waxuu ka koobanyahay hawlo oo kugu caawin doono in aad sida ugu dhaqsiyaha badan u heshid shaqo iyo in aad luuqada iswiidhishka baratid. Sidoo kale talo baan kugu siineynaa wadanka meesha aad fursado shaqo ka heli kartid. Inta aad hawlahaas ka qeybqaadaneysid waxaa lagu siinayaa magdhaw dhaqaale oo lagu magacaabo magdhawga meeleysiga.
(Guide på somaliska för dig som är ny i Sverige)
Warqad warbixin iyo foomam
Markii lagu siiyo ruqsadda degenaanshada —kaalay Xarunta shaqada!
(När du fått ditt uppehållstillstånd - kom till Arbetsförmedlingen!)
Gunnada shaqo meelaynta
Fursadda helida hoy degmo ku yaallo
Lifaaqa dalabka lacagta daganaanshada — tilmaamta habka loo buuxiyo
(Instruktion och ansökan om etableringsersättning)
Soo bandhigida bisha oo loogu tala galay lacagta daganaanshad